कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा कसले खुवाउँदैछ खाना, केके छ मेन्युमा ? - ramechhapkhabar.com
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा कसले खुवाउँदैछ खाना, केके छ मेन्युमा ?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी शुक्रबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा शुरु हुँदैछ। कांग्रेस महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्रै करिब ४६ सय सहभागी हुने अनुमान छ। यस्तै ७७ वटै जिल्लाबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि बाहेकका नेता कार्यकर्तालाई समेत गरी १० देखि १२ हजार व्यक्तिलाई दैनिक खाना खुवाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।
कांग्रेसले महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरुलाई भृकुटीमण्डपमा नै खानाको प्रवन्ध गरेको छ। खानाका लागि कांग्रेसले बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्ड र वसुन्धारास्थित दियालो फुडल्याण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ। ती दुवै आइएसओ मान्यता प्राप्त कम्पनी हुन् ।
महाधिवेशनमा खान र बस्नका लागि मात्रै तीन करोड बढी खर्च लाग्ने अनुमान कांग्रेसको छ। भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिनिधिहरुलाई भृकुटीमण्डपमा नै खानाको व्यवस्थापन भइसकेको जानकारी दिए ।
‘महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने प्रतिनिधिहरुका लागि भृकुटीमण्डपमा नै खाना खाने गरी क्याटरिङको प्रवन्ध गरिएको छ,’ भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक पाण्डेले हाम्राकुरासँग भने।
खानामा के के ?
भोजन तथा आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक पाण्डेका अनुसार महाधिवेशन स्थलमा २४ गते बिहानबाट नै चिया र बिस्कुट राखिनेछ। यसैगरी ब्रेक फास्टमा दिन अनुसार नै फरक फरक मेनु तोकिएको छ। मेनुमा स्याण्डवीच, जेरी, पुरी तरकारी, अण्डासहितको ब्रेक फास्ट हुनेछ ।
यसैगरी खाना दिउँसो र साँझ गरी दुई छाक हुनेछ। दुवै छाकको खानामा मासुको व्यवस्था छ। एक छाक खसीको मासु भए अर्को छाकमा कुखुराको मासुको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी माछा फ्राइ दुवै छाकमा राखिनेछ।
यसैगरी दाल, सिजन अनुसारको तरकारी, साग, अचार, सलाद र भात खानाको मेनुमा राखिएको छ।
अनुपम फुडल्याण्डका प्रमुख कृष्ण पौड्यालले महाधिवेशनमा दैनिक १० देखि १२ हजार व्यक्तिलाई खाना खुवाउने गरी कम्पनीका तर्फबाट आवश्यक व्यवस्थापन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार २४ देखि २७ गतेसम्म खाना खुवाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
खानाका लागि कुपन अनिवार्य
खानाका लागि कांग्रेसले कुपनको व्यवस्था गरेको छ। बिहानको ब्रेकफास्टदेखि नै कुपनको प्रवन्ध हुनेछ। प्रतिनिधि तथा सहभागीहरुले खानाका लागि महाधिवेशन स्थलबाट नै कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने आआफ्ना जिल्ला अनुसारको नेतृत्वसंग पनि समन्वय गरेर कुपन लिन सकिने छ।